၈လေးလုံးနှိမ်နင်းမှုနဲ့ဦးသိန်းစိန် – | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Civil Rights Movement ဆို ဒါကြီးကို အစိုးရက နဲနဲဖြုံလာတာသတိထားမိတယ်
မင်းတို့ တိုင်းပြည်အပေါ် တကယ် စေတနာရှိရင် ပညာရေးကို မြှင့်တင် တော်သူကို ချီးမြှောက် ဘာသာ လူမျိုးမခွဲနဲ့ »
#မိဘပြည်သူများ_ခံ_ဗျာ – မြန်မာ #၈လေးလုံးနှိမ်နင်းမှုနဲ့ဦးသိန်းစိန် – ဘာ ရယ် မ ဟုတ် ပါ ဘူး Post အ ဟောင်း လေး ပြန် ရှာ တွေ့  လို့ ပါ ဗျာ –
သီ ချင်း ဆို နေ တာ မ ဟုတ် ပါ ဘူး –
08.08.2013 Shin Ta Ra shared>>>ကိုအောင်လွင်ဦး
. မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုအုံကြွမှုကို သွေးထွက်သံယို နှိမ်နင်းခဲ့တာ ၂၅ နှစ်ပြည့် လာတဲ့အချိန်မှာပဲ တချိန်က စစ်တပ်ထဲမှာ အဆင့်မြင့် တာဝန်တွေ ယူခဲ့တဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ထိုစဉ်က အခန်းကဏ္ဍကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖော် ထုတ်ဖို့ တောင်းဆိုသံတွေလည်း ထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။
အထူးသဖြင့်ကတော့ ၈ လေးလုံး လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ထင်ရှားတဲ့ လူထုအုံကြွမှုကို နှိမ်နင်းရာမှာ ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်ခဲ့သူ တဦးအဖြစ် သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့သူ ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် တဖြစ်လဲ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အနေနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ လိုတယ်လို့ ဗြိတိန်အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ Burma Campaign – UK ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး မက်ခ် ဖာမာနား (Mark Farmaner) ကပြောပါတယ်။
” ၁၉၈၈ ခုနှစ်တုန်းက သူဟာစစ်တပ်မှာ တပ်မှူးတဦး ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ သိရပါတယ်။ ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ အမေရိကန် သံတမန် ကြေးနန်းတခုမှာဆိုရင် လည်း ၁၉၈၈ ခုနှစ် လူထုအုံကြွမှုကို နှိမ်နင်းရာမှာ အရေးပါတဲ့ အထူးနေရာက ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူ့အနေနဲ့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တုန်းက သူဘာတွေ လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို တိတိကျကျ လူသိရှင်ကြား ပြောဖို့လိုပါတယ်။ အမှားလုပ်ခဲ့တယ် ဆိုရင်လည်း မှားတဲ့အကြောင်း ၀န်ခံပြီး၊ တောင်းပန်သင့်ပါတယ်။ ”
” အဲဒီအချိန်တုန်းက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင်တော့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် က တပ်ရင်းမှူးပါ၊ ခလရ (၈၉) မှာ။ ၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ စစ်ရုံးကို G-1 နဲ့ ရောက်လာပြီးတော့မှ တောက်လျှောက်နောက်ပိုင်း အရေးအခင်းတွေ မှန်သမျှကို သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် ကိုင်တွယ်ခဲ့ရတာပါ။ သမ္မတကြီးဟာ အဲဒီအချိန်တုန်းက စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီး ဖြစ်တယ်။ သူဟာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်အေး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင် အပါအ၀င်ပေါ့လေ၊ အဲဒီကြားမှာ သူဟာ အတွင်းရေးမှူး သဘောမျိုးနဲ့ လုပ်ခဲ့ရတဲ့သူပါ။ ဒီကိစ္စတွေ အားလုံးကို သိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီကိစ္စတွေကို မှားတယ်၊ မှန်တယ် ဆိုတဲ့ဟာ လက်ရှိရှိနေတဲ့ သမ္မတကြီး အပါအ၀င်ပေါ့လေ၊ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေ မပြောရဲပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင် involved (ပတ်သက်တဲ့) အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ ”
တွေ လုပ်မယ်လို့ ကတိပေးထားတဲ့ အစိုးရ အနေနဲ့ အတိတ်က ဖုံးကွယ်ထားတာတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရလိမ့်မယ်လို့လည်း Burma Campaign – UK အဖွဲ့ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး မက်ခ် ဖာမာနား ကပြောပါတယ်။
” ပထမဆုံးအကြိမ် သမ္မတအဖြစ် ဦးသိန်းစိန် ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာ တပ်မတော်က ၈၈ ခုနှစ်မှာ အာဏာရယူပြီး၊ တိုင်းပြည်ကို ကယ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး ချီးကျူးစကား ပြောခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ သူဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သမားလို့ ပြောနေပါတယ်။ တကယ်တမ်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ့်သူ ဆိုရင်တော့ ကျောင်းသားတွေကို လမ်းပေါ်မှာ ပစ်သတ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စကို ကာကွယ်နေလို့ မရပါဘူး။ ”
This entry was posted on March 7, 2015 at 4:22 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.